जसलाई सलमान खान आफैँले बोलाएर ‘राधे’ मा डेब्यू गराए, को हुन यी युवक ? – Tufan Media News
जसलाई सलमान खान आफैँले बोलाएर ‘राधे’ मा डेब्यू गराए, को हुन यी युवक ?
२० जेष्ठ २०७८, बिहीबार १७:००
एजेन्सी। मे १३ इदको दिन रिलिज भएको बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको चलचित्र ‘राधेः योर मोस्ट वान्टेड भाइ’ ले झुर समिक्षा र प्रतिक्रियाहरू पायो । रेटिङको हिसाबमा पनि सलमानको चलचित्रले अहिलेसम्मकै कम रेटिङ पाएको चलचित्रको ‘रेकर्ड’ बनायो।
यद्यपि सलमानको तारिफ र प्रशसकले भने चलचित्र हेरेर मज्जा लिए । यस्तै अहिले चलचित्रमा रणदीप हुड्डासँगै उनको दाया हात बनेर सधैँ उनको वरिपरि रहने एक व्यक्तिको चर्चा चुलिएको छ । बलिष्ठ पाखुरा, ठूलो छाति भएका बडेमानका ती व्यक्ति लोता उर्फ सांगे शेल्ट्रिम हुन् । उनी पूर्व भुटानी सेना अधिकारी र शाही अंगरक्षक हुन्।
बलिउडका ‘भाइजान’सँग बलिउड इन्डस्ट्रीमा डेब्यु गर्ने मौका पाएकोमा सांगे पनि निकै खुसी र आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् । भलै चलचित्रले राम्रो प्रतिक्रिया पाएन सांगेलाई त्यसले केही फरक परेको छैन् । त्यसैले उनले राधेलाई ट्रोल गर्नेहरूलाई जवाफ फर्काउँदै भनेको थिए, “एकदिनमा ४.२ मिलियन भ्युज पाइरहेकोमा १–२ लाख ट्रोल केही फरक पर्दैन।”
एक फ्यानको रूपमा सलमानसँगको भेटले जुराएको मौका
सांगेले बलिउडमा यति ठूलो मौका सलमानसँगको एक भेटले जुराएको हो । यसका साथै उनको बलिष्ठ पाखुरा र फिट बडी र फिट्नेसको लगावकै कारण उनले राधेमा ‘लोता’ खलनायकको भूमिका पाएका हुनभन्दा फरक नपर्ला।
सलमान आफैँपनि ५० कटिसक्दा पनि फिट्नेसमा उत्तिकै लगाव राख्छन् । सांगेको पनि यो प्रतिको लगावले सलमानको रोजाइमा सांगे परेको हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फिटनेस प्रतियोगीतामा आफ्नो देशलाई चिनाउने हुटहुटीले सांगेले सन् २०१३ मा सेनाबाट स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लिएका थिए।
फिटनेस प्रतियोगीताहरूबाट धेरै पुरस्कारहरू जितिसकेपछि उनले आफ्नो गृहनगरमा जिम सुरु गर्ने निर्णय लिए र सँगै अभिनय पनि सुरु गरे । यही क्रममा उनको कुराकानी बलिउड फिल्म निर्माता हैदर खानसँग भयो । फिल्म निर्माता खानले सांगेलाई ओटीटी फिल्मका लागि मुम्बई बोलाए र सांगे आएपनि।
“एकदिन उहाँ (हैदर)ले मलाई उहाँ सलमान खानको डबंग (दबंग ३) को सेटमा सलमान खानलाई भेट्न जान लागेको र मलाई पनि जान मन भए जाम भन्नु भयो,” सांगेले विगत सम्झिए ।त्यसपछि जे भयो सांगेले सपनामा पनि कल्पना गरेका थिएनन् ।भुटानका पनि बिगस्टार मानिने सलमानलाई प्रत्यक्ष भेट्दा उनी त्यसलाई एउटा जादुयी क्षणभन्दा कम सम्झदैनन्।
त्यस्तै ५०० भन्दा बढी मानिसहरू सेटमा बसेर काम गरिररहेको देख्दा सांगे बलिउडप्रति अझै आकर्षित भए ।सलमान नाइट छायाङ्कनमा थिए तर पनि सलमानले सांगेसँग भेट्न समय निकाले । सांगेकाअनुसार सलमान र उनीबीच करिब एक घण्टा लामो गफ भयो र अझ सलमानले उनलाई डिनरको लागि पनि अफर गरेका थिए।
सांगेकाअनुसार उनीहरूबीच फिटनेसका विषयमा मात्र कुराकानी भयो । “उहाँले मसँग बसेर एक घण्टा भन्दा धेरैबेर गफ गर्नुभयो । उहाँको सिनका लागि बोलाएपछि मात्रै उहाँ सेटमा जानुभयो । एक अपरिचित व्यक्तिलाई यति धेरै माया र सम्मान दिनु भनेको यो उहाँको उदारता थियो,” सांगेले भने।
ज्या’न बचाउन ट्वाइलेटमा लुक्दा पनि ढोका फोडेर कु’टे,२ तलाबाट हाम फाल्दा बचियो
पोखरामा सेती नदी थुनिएपछि
गायिका पुर्णकला वि.सी.को मार्मिक
एलिना चौहान र हेमन्त
लामो समय पछि सुरेश
रातारात भाइरल बन्यो अलिफ
नायिका आचल शर्माको नाकको